Fampandrosoana ny baolina kitra Malagasy Naka ny hevitry ny tany Vakinankaratra ihany koa ny FMF
Tontosa ny faran’ny herinadro lasa teo, tao amin’ny Tranompokonolona Antsirabe ny hetsika fakan-kevitra hoan’ny fampandrosoana ny baolina kitra Malagasy.
Ny ligin’ny baina kitra ao Vakinankaratra sy ny Federasiona Malagasin’ny baolika kitra no niara-nanantontosa ny hetsika ka namoriana ireo mpitia kitra sy ireo sekoly, klioba ary toeram-panofanana bolina kitra misy nanerana an’i Vakinankaratra. Niatrika ity hetsika ity ny FMF, Rabekoto Arizaka Raoul sy ny ekipany. Nambarany tamin’izany fa zava-dehibe ny hetsika toa izao, ahafantarana ny heverin’ny mpitia kitra hampandrosana ity taranja ity. Hitondra fivoarana hoan’ny faritra ny hetsika tahaka izao, hoy hatrany izy satria tanjona ny hampiroboroboana ny kitra mba ahafahana mijery ireo mpilalao isam-paritra, ahafahana misafidy mpilalao faran’izay betsaka. Raha hoan’i Vakinankaratra manokana dia azo lazaina fa anisan’ireo namokatra mpialao kalaza ihany koa ity faritra ity ary antenaina fa hitondra vokatra hatrany ny hetsika tahaka izao. Hoan’ny ligin’ny baolina kitra Vakinankaratra indray dia fantatra fa nakarina ho roa ireo ekipa handray anjara amin’ny fifaninanana nasionaly amin’ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara ho avy n any Telma coupe de Madagascar dia ny Fc Vakinankaratra sy ny Fc Disciples izany, satria ny Fc Vakinankaratra no nitana ny laharana voalohany sady efa tompon’ny amboara teo aloha ihany ary ny FC Disciple kosa no laharana faharoa.